संसद समितिमा भक्कानिए पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, स्मरण सुन्दा माधव नेपाल भावुक ! - Sabal Post
संसद समितिमा भक्कानिए पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, स्मरण सुन्दा माधव नेपाल भावुक !
काठमाडौं– नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई आफूलाई बधाइ तथा शुभकामना दिने संसदीय समितिको कार्यक्रममा भक्कानिएका छन् । आफ्नो राजनीतिक जीवनसँग जोडिएका विगतका घटनाको स्मरण गर्दै मन्त्री भट्टराई संसदीय समितिमा भक्कानिएका हुन् । मन्त्री भट्टराईले विगतका घटना स्मरण गर्दा समितिको बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पनि भावुक बने । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आइतबारको बैठकमा नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईलाई बधाइ तथा शुभकामना दिने कार्यक्रम पनि थियो । समितिका सदस्यहरुले बधाइ तथा शुभकामना दिएपछि मन्त्री भट्टराईले आफ्नो मन्तव्य शुरु गरे । मन्तव्यकै क्रममा उनले आफ्नो बिगतलाई स्मरण गरे । विगत सम्झिने क्रममा नेता भट्टराईले नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध र आफूले गरेको संघर्षको विषय उठाए ।
उनले २०४० सालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन गर्दा बिरामी परेर ६० दिन अस्पताल बस्नु परेको घटना सम्झिए । ‘२०४० सालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा खटिएको थिएँ । रातदिन नभनी, खाइनखाई खटिएछ । त्यसैको असरले होला निकै बिरामी परेँ । शिक्षण अस्पतालमा ६० दिन बस्नुपर्‍यो । डाक्टरहरुले नै आशा मारिसकेका थिए,’ यति भन्दा मन्त्री भट्टराईको गला अवरुद्ध भयो । एकछिन रोकिएपछि उनले आफ्नो स्मरणमा रहेको घटनाक्रमलाई पुन सुनाउन थाले, ‘उहाँ (माधव कुमार नेपाल) भेट्न आउनु भयो । माधवकुमार नेपाल हैन, अर्को कुनै नाममा, जब उहाँले मलाई स्पर्श गर्नु’भो, मलाई जीवनप्रति आशा पलायो । सादय त्यो बाँच्ने आधार थियो ।’
भट्टराईले यति भनिनसक्दै माधव नेपाल पनि भावुक बने । नेता नेपाल आँखामा लगाएको चस्मा निकालेर आँसु पुछ्न थाले । नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले आफ्नो स्मरण सुनाउँदा आइतबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकको माहोल भावुक बन्यो । मन्तव्यका क्रममा मन्त्री भट्टराईले समितिका अन्य सदस्यसँगका पनि आफ्ना स्मरणीय क्षण सुनाए । आफ्नो कार्यकालमा पटक–पटक समितिसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरेका मन्त्री भट्टराईले संसदीय समितिले जारी गर्ने निर्देशन शिरोपर गर्ने प्रतिवद्धता पनि दोहोर्‍याए ।
अघोरी बाबाकी श्रीमतीको कर्तुत : आफ्नै पतिलाई…
पर्वत पहिरो अपडेट:९ जनाको शव भेटियो, एक…
सबै पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउन आर्थिक…
त्रिभुवन विश्वबिद्यालयद्वारा नतिजा प्रकाशित !
एसईईमा हुने भयो नयाँ व्यवस्था